Heshiis qarsoodi ah oo dhexmaray Cumar C/rashiid iyo dowladda Kenya oo la kashifay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Heshiis qarsoodi ah oo dhexmaray Cumar C/rashiid iyo dowladda Kenya oo la kashifay (AKHRISO)
Qoraal ay soo saartay hay’ad cilmi baaris ah uu fadhigeedu yahay dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay xog ku saabsan heshiis Kenya la gashay ra’iisul wasaaraha xilkiisa dhamaaday ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid oo haatan u sharxan xilka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Waxaa qoraalka lagu sheegay inay jirto xog ku saabsan rabitaanka dowladda Kenya oo ay ku doonayso in Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke uu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Cumar C/rashiid uu Kenya u ballan qaaday in heshiis iyada dan u ah laga gaari doono muranka xuduudka badda ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya, islamarkanaa ay Kenya sidaasi u taageerto musharaxnimadiisa.
Dhinaca kale, waxaa qoraalka lagu sheegay inaysan caddeyn sida Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke uu balantaasi u fullin karo, iyadoo isku day hore uu qeyb ka ahaa uu ka socon waayay baarlamaankii KMG ahaa ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa lagu eedeeyay inuu qeyb ka ahaa heshiis ay dowladii KMG ahayd ee uu ra’iisul wasaaraha ka ahaa u saxiixday dowladda Kenya lahaanshiyaha qeybta badda Soomaaliya, taas oo muran weyn dhalisay balse ugu dambeyn la isla tagay maxkamadda caalamiga ah ee Hague, balse aan weli laga gaarin go’aan rasmi ah.
Hoos ka aqriso qeyb ka mid ah caddeynta qoraalka